Ndụmọdụ Twitter maka Irè Mgbasa Ozi Twitter
Wednesday, June 23, 2010 Sunday, October 19, 2014 Adam Obere
Ihe ngosi a nwere ihe karịrị 24,000 echiche na Slideshare ma nwee ọtụtụ ozi… niile juru na snippets nke ihe odide 140 ma ọ bụ obere. Ga-ahụ ụfọdụ ndị odeakwụkwọ site na Martech Zone n'ime ebe ahụ, kwa!
Di iche iche di iche iche na ntuziaka ndia bu ihe akaebe nke ike nke Twitter dika uzo nkwurita okwu. Eledala ike nke usoro a anya. Lee ihe ngosi - 140 Twitter Atụmatụ:
Y’oburu na ichoro ozi ndi ozo banyere otu ahia ahia nke Twitter gha enyere ahia gi aka, buru otu Azụmaahịa Twitter Maka Ọnụ. Dika usoro Dummies dum, akwukwo a kpuchitere ma onye mbido na usoro di elu iji gbasaa Twitter dika ihe nkwurita okwu.
PS: Kyle edeghị post a, Doug dere. Kyle bụ onye na-arụsi ọrụ ike mana Doug chọrọ ijide n'aka na ọ na-enweta nlebara anya o kwesịrị maka nnukwu ngosi na akwụkwọ dị egwu.
Tags: NwachukwuTwitterAtụmatụ twitter
Jun 24, 2010 na 6:09 AM
Daalụ maka mkpu! Enwere m ekele maka ya.
Jun 24, 2010 na 7:08 AM
Echetara m mgbe ị rịọrọ maka ndụmọdụ ndị a n’afọ gara aga. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha na-ekwu eziokwu, echere m na ị ga-enweta usoro ọhụụ ọhụụ na afọ a.
Jun 30, 2010 na 3:54 AM
Ahutara otutu ndi mmadu ohuru m choro igbaso